CBD mbukota, Glass droper Bot, 60ml E-mmiri mmiri kalama, CBD Balm ite - ANKE
Ihe eji egbu nje dị n'aka
CBD Balm ite
CBD Glass ite
Unicorn Eliquid Karama
Unicorn bọmbụ V1
Ọzọ Unicorn Type Karama
Mejupụta (Mee N'onwe Gị) Eliquid Bottle
Bọmbụ V1 ịghasa Atụmatụ
V3 ịghasa Atụmatụ
Ọnụ ọgụgụ Obibi Karama
Ighikota Cap Karama
Ịhapụ-apụ NDỤMỌDỤ Bottle
Igbe na Akwụkwọ tube
BIG Size Karama
500ml Ma 1l Karama
Beri Cap Karama
Ewepụghị Cap Karama
Ọzọ Popular Pee Karama
Ọzọ Popular Pita ọkpọ
Ọzọ Size Plastic Bottle
Ele ndị ọzọ
ANKE mbukota Co., Ltd.
Mmadụ Bịa na-ezitere anyị gị zuru ezu chọrọ. Mgbe ahụ, anyị nwere ike kwado gị kpọmkwem na-enye na ndị ọzọ zuru ezu Ama isi na gị ina…
Karama na achara okpu-ANKE mbukota
Amber iko ite na aluminum okpu-ANKE mbukota
CBD nwere CBD Balm / Ude nwere agba ọkụ? Na-atụle ụdị agba dị mma maka ngwaahịa CBD nwere agba? Agba amba bụ nhọrọ kacha mma ugbu a. Ọ bụ ọkara uzo, ndị mmadụ pụrụ ịhụ n'ime ngwaahịa. Na amba agba nwere ike ime ka ihe ndị na-acha agba dị mma. Ndị mmadụ ca ...
Hazie Printing CBD Aluminium Shinny Plastic Bag-ANKE mbukota
Nyaahụ, anyị webatara akpa obibi akwụkwọ kraft maka akwụkwọ maka Solid CBD. Anyị kwuru na maka ụfọdụ mfe sere maka hemp na okooko osisi. Ihe omuma a bu ihe ka nma. Ma olee maka maka ihe osise mara mma? Aluminom Shinny Plastic ihe di nma. Nwere ike ịlele foto maka akwụkwọ. Ndị ...
Printing Kraft Akwụkwọ akpa si ANKE mbukota
Akpa bụ ihe eji eme ihe maka ngwaahịa CBD. Mkpụrụ, okooko osisi, nri na ngwaahịa ndị ọzọ siri ike, ihe a niile nwere ike ịjuju na akpa. Akpa akwụkwọ Kraft bụ nhọrọ nhọrọ. Nke a bụ nkọwa maka ihe a: Akpa na-enweghị akwụkwọ: Anyị nwere ụfọdụ akpa ire ere na-ere ọkụ na ngwaahịa oge niile. Nwere ike ...
Sirinji maka ụdị dị iche iche CBD Mmanụ
Ọtụtụ ụdị CBD na-emepụta mmanụ CBD dị elu ugbu a. Have nwere atụmatụ a? Ngwaahịa ndị a dị elu kachasị abanye n'ime ngwugwu dị elu. Sirinji Luer Lock bụ nhọrọ kacha mma. Sirinji anyị bụ nke iko zuru oke, ọ bụ enyi na gburugburu ebe obibi. Ihe omuma bu ogwu ogwu. Nwere ike iburu oi ọ bụla ...
Akwụkwọ tube maka CBD Tincture Bottle
Bipute Hemp na okpu nke CBD ite-ANKE mbukota
Ruo ugbu a, anyị kwuru maka ụdị okpu dị iche iche maka ite CBD. Enwere okpu achara, okpu plastik na aluminom. Anyị kwukwara banyere ụcha okpu. Maka okpu achara, anyị nwere ike ịme achara gbara ọchịchịrị, achara dị nchara. Na maka okpu rọba, anyị nwere ike ịgbanwe na agba dị iche. The aluminum okpu nwere ike ahaziri t ...
Reday maka HEMP & CBD Expo
Otu ụbọchị pụọ na ihe ngosi ahụ! You dị njikere maka ihe ngosi？ Anyị na-ugbu a idozi anyị ụlọ ndò na-akwadebe ngwaahịa ka ị gaa. All ngwaahịa ga-gosiri: plastic / iko CBD karama, plastic / iko ite na ịghasa okpu, childproof okpu, aluminum okpu, aluminum ikpe na ...
Glass ite-HEMP & CBD Expo
Enwere ite dị iche ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ ụbọchị gara aga na akụrụngwa. Anyị nwere ọkwa dị iche iche na ite a. Okpu nke ite ahụ bụ okpu na-enweghị ụmụaka, ọ bụ nchekwa karịa ụmụaka. Ma ọ bụkwa nnukwu omume na ahịa CBD. Agba na-anabata ọrụ omenala. Chọrọ ịmụtakwu banyere ite ahụ? Na-eche f ...
Pop vials na Childproof Cap-HEMP & CBD EXPO
Plastic Childproof Vial-HEMP & CBD Expo
Anyị na-ekwu banyere akpa plastic n'oge gara aga. Ọ bụ a childproof mbukota maka siri ike CBD Products. Anyị nwere mbukota ọzọ maka ngwaahịa siri ike-Vial na-egbochi ụmụaka. Anyị nwere 30ml, 50ml, 60ml, 80ml, 120ml, 160ml, 240ml vial ka ị họrọ. Nwere ike iburu mkpuru osisi, ifuru ma ọ bụ ngwaahịa ndị ọzọ siri ike na vial a. Ihe c ...
Childproof akpa-HEMP & CBD Expo
Mgbe anyị na-akwado CBD EXPO, anyị ANKE Mbukota (www.ankepacking.com) kpọtụrụ ụfọdụ ndị na-emepụta CBD ka ha mụọ ihe ha na-ebu, yana ihe ha chọrọ ịchọta. Imirikiti n'ime ha gwara anyị na ha na-ahọrọ mbukota ụmụaka. Ọ ga - abụ ihe nchekwa nye ụmụaka, nke a ga - abụkwa omume nke ...
10ml plastic CBD Bottle-HEMP & CBD Expo
Glass CBD Bottle-HEMP & CBD Expo
You na-arụsi ọrụ ike na-akwadebe maka HEMP & CBD EXPO. Taa, anyị mechara mepụta ndepụta nlele. Chọrọ ịma ihe anyị kwadebere maka Expo a? Okirikiri karama CBD. Anyị na-akwadebe karama 10ml, 15ml, 30ml, 60ml, 100ml na karama 120ml. Maka agba, anyị nwere doro anya, acha anụnụ anụnụ, amba, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, matt bl ...
Plastic ite-HEMP na CBD Expo
Adreesị: Ụlọ No.2, Xiaogang mingzhu Beiheng Road, Baiyun District, Guangzhou City, China.